Kufuridzira muimba yekugara
Imba yekugara ndiyo imba huru muimba, ndicho chikonzero chekushongedza kwayo kunoda kupiwa kunyatsotarisirwa. Mushure mezvose, zviri pano kuti vashanyi vauye, uye pano pano kuti mhuri inogona kuuya pamwechete kuti iite nguva yekubatana.
Kusarudzwa kwekushaiwa muimba yekugara
Paunosarudza chisarudzo chekushongedza denga, unofanirwa kuenderera mberi kubva mumutauro wakawanda wechisarudzo cheimba yacho, pamwe nekukwirira kweimba yako. Saka, mumakamuri apasi hazvikurudzirwi kushandisa mavara masikati uye zvidimbu zvemazinga akawanda. Muchikamu chemukatikati, chivako chepamusoro-soro ne LEDs hachatarisi zvakanaka. Somugumisiro, munhu haagoni kufunga nezvekugadzirisa denga kunze kwegadziriro yegadziriro yekamuri rose seyakazara.
Mazano ekudenga muimba yekugara
Kusvika iye zvino, mune zvakawanda zvingasarudzwa zvekuvepa denga muimba yekugara. Funga nezvevakakurumbira kwavari.
Mirrored ceilings yekamuri rekugara - chirongwa chakasimba uye chemazuva ano chinonyatsooneka chiwedzera imba, uye chizadze nechiedza. Iwe unogona kusarudza girazi regirazi yemhando dzakasiyana-siyana, zvisinei, iyo yekushongedza haina kukurudzirwa kumakamuri umo muimba yekurara inosanganiswa nekamuri yekurara, sezvo chivako chinenge chichiratidzwa chichidzivisa chikamu chechikamu chinokosha chekuchenesa.
Denga rePasterboard muimba yekugara - rave richishandiswa kwemakore akawanda. Kudenga kwakadaro kwakarurama, kwakanaka, pasina maziso anooneka. Mukuwedzera, plasterboard inokubvumira kuti utambe nechimiro uye uite zvidimbu zvakasiyana-siyana zvekugadzirisa kwakasiyana. Saka, zviyero zviviri uye kunyange zvitatu zvepakati munzvimbo yekugara zvinotarisa.
Yakatsetseka denga - kushandiswa kwekugadzirisa zvinhu kunogona kuitika kunyange mumakamuri akabatanidzwa. Semuenzaniso, denga remazuva ano rinotarisa zvakanaka mukicheni-muimba yekugara. Chinhu chinokosha chekugara kwedenga chinogona kutaridzirwawo mavara akasiyana-siyana, anowanikwa kumusarudzo. Mifananidzo yakareba yakasimudzwa muimba yekuraramira - yemazuva ano, inofadza uye yekugadzirisa sarudzo.
Jikoni kubva purasitiki - zvinoita uye zvigadzirwa zvemazuva ano
Maketeni e verandas nematanda
Nzvimbo yekodhi yekugara
Bhokisi reParsterboard muimba yega
Chipfeko chinoshongedza pamusoro
Shati-girazi mabhandero ane mahwindo egirazi
Rusvingo rwakachena mukati mekunze
Dombo rekugadzirira kubwinya kwemukati
Nzvimbo yemoto inoshongedza yakaitwa nemakadhibhodhi nemaoko
Dhiabhorosi mbiru yekicheni kubva ku chipboard
Shebbi-chic mukati-mukati-kunyaradza nekuita zvinhu zvose
Ungachengeta zvakawanda zvakadini musanganiswa wakagadzirirwa?
Kaka mushure mekuita sterilization
Girazi yeGreen - iwe unogona sei kuumba mafungiro emvura mukicheni?
Kurapa muviri mumuviri we osteochondrosis
Dresses kubva chiffon 2015
Kudzivirira kwe glaucoma
Rings kubva pa palladium
Jikoni muimba yemunyika - zvakanakisisa mazano ekugadzira
Sei mwana achikotama uye achichema panguva yekudyisa?
Mbatata yakasvibiswa yemwana
Pani yakaisvonaka yekicheni - kuti ungasarudza sei nzira yakanakisisa yekugadzirisa
Nzira yekuve hipster sei?
Nina Dobrev naScott Eastwood
Zvokudya zviduku zvinodhura kubva kuMaya Plisetskaya nezvimwe zvingasarudzwa
Shish kebab munharaunda inopisa
Ungashamba sei chinhu chakateurwa?
Nyama muChinese mumuchu unotapira uye wakaoma
Ropa kubva mukoti